Politika Manjavozavo Ao Yemen Mitohy Miaraka Amin’ny Fanambaràna “Tsy Manaraka Lalàm-panorenana” Nataon’i Al Houthi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2015 4:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Català, Español, Deutsch, English
Taorian'ny fihazohazoana politika tao Yemen nandrtry ny herinandro maro, nanambara tamn'ny 7 Febroary e ny milisy Houthi izay naka ny fifehezana an'i Sana'a renivohitr ary nanery ny Filoha Abdu Rabu Mansour Hadi sy ny kabinetrany hametra-pialana tamin'ny volana lasa, fa horavàn-dry zareo ny Antenimiera, hametrahany ny rantsana fiarovana sy mpanoime vaovao avy ao aminy, fantatra amin'ny hoe “Supreme Revolutionary Committee (SRC), Kaomity Faratampon'ny Revolisiona” ho mpitondra an'i Yemen.
Efa hatramin'ny 22 Janoary i Yemen no tsy nisy mpitondra ara-dalàna. Nanao kaonferansam-pirenena nandritry ny telo andro ireo Houthi mpitarika, nifarana tamin'ny Sabotsy 1 Febroary teo tamin'ny nanomezany ho an'ireo mpifanandrina ara-politika ao Yemen andro telo hahitàna fifanarahana hamenoana ny fahabangana ara-politika na raha tsy izany dia izy ireo no handray ny fitondràna.
Satria tsy nisy marimaritra hita, dia nampiana teloandro fanampiny ilay fe-potoana, izay nifarana ny 7 Febroary tamin'ny 4 ora tolakandro, ora tao Yemen, narahan'ilay fanambaràna nolazaina fa “Fanambaràna araka ny Lalàm-panorenana”. Noravàn'ny Houthis ny antenimiera ary nosoloiny Transitional National Council (TNC) – Filankevi-pirenena Tetezamita – ahitàna mpikambana 551, hisy Filankevitry ny filoha hahitàna mpikambana 5 hofidian'ny TNC ary hatoltraho ankataavin'ny SRC, ao anatin'ny taona roa haharetan'ny tetezamita. Nalefa tamin'ny fahitalavitra ny fanambaràna manontolo avy ao amin'ny Lapan'ny Repoblika, ary nadikan'i Haykal Bafana ho amin'ny teny Angisy ato:
Afomanga sy poa-basy tao in #Sanaa sy Saada ho fankalazàna ny Fanambaràna an-dry zareo #Houthi .
Mitohy ny fiainana ho an'ireo Yemenita na eo aza ny kornana ara-politika, araka izay anasongadinan'ity lahatsoratra avy amin'ny New York Times azy ity: